14,660,346 unique visits
Daawo Sawirada: Raa'isal Wasaare Saacid oo markiisii ugu horeysay tegay Magaalada Baladweyne
Magaalada Baladweyne ee Xaruunta Gobolka Hiiraan ayaa waxay maanta muujisay soo dhaweyn wanaagsan, oo ay u sameysay Masuuliyiintii Xukuumada Somaliya ka socotay ee booqashada ku tegay.
Galkacal on February 06 2013 20:43:38 ·
Read More · 0 Comments · 2518 Reads
· Dowladda oo jawaab adag ka bixineysa eedeymaha uu u soo jeedinaayo Agaasimihii Nabad Suggida (Warbixin)
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay bilowday inay jawaab ka bixiso eedeymaha kul kulul, ee uu Madaxda Dowladda Soomaaliya u soo jeedinaayo Agaasimihii hore ee Hay�adda Nabad Suggida Qaranka Axmed Macalin Fiqi.
Laacib on May 23 2013 22:40:17 ·
Read More · 0 Comments · 526 Reads
· Sheekh Axmed Madoobe oo hadalo dhaleeceen leh u jeediyay Madaxda Dowladda Somaliya
Sheekh Axmed Maxamed Islaam �Sheekh Axmed Madoobe�, ayaa wuxuu markale uu hadalo dhaleeceen leh uu u jeediyay Madaxda Dowladda Federalka ee Soomaaliya.
Laacib on May 23 2013 22:05:46 ·
Read More · 0 Comments · 1056 Reads
· Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo caawa ku safraaya wadada xiriirisa Dhoobley iyo Afmadow
Boqolaal askari oo ka tirsan Ciidamada Midowga Afrika ee Dowladda Sierra Leone ka socda, ayaa waxay maanta soo gaareyn Degmada Dhoobleey ee Gobolka Jubbada Hoose.
Laacib on May 23 2013 20:45:42 ·
Read More · 0 Comments · 1369 Reads
· Raa'isal Wasaare Saacid oo ka hadlay ka noqoshada Xildhibaanada ee mooshinka & Arrimaha Jubbooyinka
Raa'isal Wasaaraha Xukuumada Somaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid", ayaa wuxuu ka hadlay xaalada arrimaha Jubbooyinka ka taagan iyo weliba Xildhibaanada Baarlamaanka, oo Arbacadii ka laabtay mooshinkii ay ka keeneen Xukuumada.
Galkacal on May 23 2013 19:21:33 ·
Read More · 0 Comments · 1147 Reads
· Dilal kala duwan oo ka dhacay Degmooyinka Garissa, Dhadhaab iyo Wajeer ee dalka Kenya
Dilal siyaabooyin kala duwan u dhacay ayaa waxay ka dhaceen Degmooyinka Garissa, Dhadhaab iyo Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Galkacal on May 23 2013 16:34:06 ·
Read More · 0 Comments · 1214 Reads
· Garoonka Diyaaradaha ee Axmed Gurey oo si rasmi ah loo furay & dhoofinta dhuxusha oo Kismaayo ka bilaabatay
Waxaa maanta si rasmi ah dib loogu furay Garoonka Diyaaradaha Axmed Gurey ee Magaalada Kismaayo, iyadoo dhinaca kalana ay Magaaladu ka soconeyso daabuleynta dhuxusha, oo laga dhoofinaayo Dekeda weyn ee Magaalada.
Shiil on May 23 2013 15:31:28 ·
Read More · 0 Comments · 1843 Reads
· Dil toogasho oo lagu xukumay raggii ka dambeeyay dilka Sheekh C/qaadir Gacamey
Maxkamada Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka Sida ee Puntland ee Gobolada Mudug, Nugaal, Sool iyo Cayn, ayaa waxay xukun dil toogasho ah ay ku riday, ilaa todobo nin oo dhalinyaro ah.
Shiil on May 23 2013 14:05:19 ·
Read More · 0 Comments · 1470 Reads
· Axmed Inji "Nabadoon Xuseen Toori waxaa lagu dilay, isagoo adeer ii ah. Si xun ayay u dileen isaga iyo wiil uu dhalay."
Axmed Cabdalla Cusmaan "Axmed Inji" ayaa wuxuu si kulul uu u cambaareeyay fal Arbacadii lagu gawracay nin adeer u ah iyo wiil uu dhalay, oo lagu gawracay Deegaanka Duduma qaris ee Gobolka Hiiraan.
Shiil on May 23 2013 13:45:28 ·
Read More · 0 Comments · 1903 Reads
· Prof. Xasan Sheekh "Madaxweyne Aadan Cadde ayaa kamid ahaa Madaxdii saxiixay jaatarka Midowhga Afrika"
Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu maanta ka qeyb galay Munaasabad ballaaran oo ka dhacday Magaalada Muqdisho, oo lagu taageeraayay aas aaska Ururka Midowga Afrika.
New York on May 23 2013 13:25:25 ·
Read More · 0 Comments · 1622 Reads
· Xoogaga Shabaab oo lix ruux qafaashay, markii ay wadada u galeen Xoogaga Shabaab ayaa waxay lix ruux ka qafaasheen inta u dhaxeyso Degmada Ceelwaaq iyo Deegaanka Buusaar ee Gobolka Gedo.
New York on May 23 2013 13:00:10 ·
Read More · 0 Comments · 1315 Reads
· Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Somaliya oo booqasho ku joogga dalka Sacuudiga "SAWIRRO"
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Dr.Maxamed Nuur Gacal ayaa booqasho ku jooga Magaalada Jeddah ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya , waxaana uu uga sii gudbi doonaa Caasimadda Riyadh si uu ula kulmo Mas�uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Sucuudiga. New York on May 23 2013 12:39:07 ·
Read More · 0 Comments · 1429 Reads
· Banaanbax maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho
Banaanbax lagu taageeraayo dib ula noqoshada Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinkii ka dhanka ahaa Xukuumada Saacid iyo sanad guurada 50-aad ee ka soo wareegatay aas aaska Midowga Afrika, ayaa wuxuu maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.
New York on May 23 2013 12:14:20 ·
Read More · 0 Comments · 1241 Reads
· Askari British ah oo lagu dilay Magaalada London "Daawo Sawirada"
Wararka ka imaanaya Magaalada London ee dalka Uk ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka Uk lagu dilay xaafad ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
Rashka on May 23 2013 09:33:27 ·
Read More · 0 Comments · 3123 Reads
· Tarsan "Weli isbaarooyin ayaa yaala Gobalka Banaadir oo qaarkood maleeshiyaad ay dhigteen"
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka hadlay rag uu sheegay in isbaarooyin ay uyaalaan Magaalada Muqdisho oo uu ku sheegay maleeshiyaad iyo ciidamo ka tirsan Dowladda inay isugu jiraan.
Rashka on May 23 2013 08:37:37 ·
Read More · 0 Comments · 837 Reads
· Ciidamada Al-Shabaab iyo ciidanka New Police oo dagaalamay iyo khasaaro dhimasho ah oo ka dhashay
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Gobalka Hiiraan duleedkeeda dhanka waqooyi ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyo kuwa New Police ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa ku dagaalamay deegaan qiyaastii 50-km ujirta Magaalada Beladweyne ee Gobalka Hiiraan.
Rashka on May 23 2013 08:08:30 ·
Read More · 0 Comments · 3515 Reads
· Miino lagu arkay Buundada Xamar jajab iyo ciidamo Booliis ah oo isku gadaamay,xirayna wadada
Ciidamo Booliis oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray nawaaxiga buundada Degmada Xamar Jajab ee Gobalka Banaadir halkaasi oo la sheegay in waxyaabaha qarxa lagu arkay.
Rashka on May 23 2013 07:40:28 ·
Read More · 0 Comments · 502 Reads
· Dowladaha Suudaan iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis ciidan
Dowladaha Suudaan iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis ka dhan ah ka shaqeynta ciidanka xooga dalka Soomaaliya iyo sidii ciidanka loo horumarin lahaa.
Rashka on May 23 2013 07:26:16 ·
Read More · 0 Comments · 1318 Reads
· Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Saraakiil kale oo gaaray Ceelbuur, xilli dagaalo laga cabsi qabo (Warbixin)
Xilli khilaafaad daran uu ka dhex taagan yahay hogaanka sare ee Al Shabaab, ayaa waxaa Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud gaaray Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Saraakiil kale.
Galkacal on May 22 2013 22:11:10 ·
Read More · 0 Comments · 5453 Reads
· Al Shabaab oo nin sarifle ahaa ka qafaalatay Degmada Baardheere
Ciidamada Amniyaadka ee Ururka Al Shabaab ayaa waxay maanta nin dhalinyaro ah, ay ka qafaasheen Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Galkacal on May 22 2013 22:00:18 ·
Read More · 0 Comments · 659 Reads
· Xildhibaano badan oo Madaxda ku dhaleeceeyay inay kala fur fureyn Xildhibaanadii mooshinka soo gudbisay
Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka ee Soomaaliya ayaa waxay qaarkood si kulul u sheegeen, in maanta ay Magaalada Muqdisho ka dhacday wax aad iyo aad u xun.
Galkacal on May 22 2013 20:46:57 ·
Read More · 0 Comments · 1239 Reads
· Page 1 of 771: 1234...771